Afɔremuka a wɔbɔ ɔhyew afɔre wɔ so (1-7)
Ɔsɛn a wɔde kɔbere ayɛ (8)
Ɔhwɛe sɛ nneɛma a wɔde bɛyɛ ɔsom ntamadan no aso anaa (21-31)
38 Ɔde ɔkanto dua yɛɛ afɔremuka a wɔbɛbɔ ɔhyew afɔre wɔ so. N’afã anan nyinaa ɔyɛɛ no pɛpɛɛpɛ; ne tenten yɛ basafa* anum, ne tɛtrɛtɛ yɛ basafa anum. Efi soro besi fam nso, ɔyɛɛ no basafa abiɛsa.+ 2 Afei ɔyɛɛ mmɛn wɔ ntwea anan no so. Ɔyɛɛ afɔremuka ne mmɛn no nyinaa boom. Owiei no, ɔde kɔbere faa afɔremuka no ho.+ 3 Ɛno akyi no, ɔyɛɛ afɔremuka no ho nneɛma nyinaa, ade a wɔde nsõ begu mu, sofi, nkankyee, adinam, ne nkankyee a wɔde ogya gu mu. Kɔbere na ɔde yɛɛ ɛho nneɛma nyinaa. 4 Ɔde kɔbere yɛɛ nkantankantan de hyɛɛ afɔremuka no mfinimfini. 5 Ɔyɛɛ nkawa anan a wɔde nnua nteaanteaa no bɛhyehyɛ mu wɔ ntwea anan no so wɔ baabi a ɛbɛn kɔbere nkantankantan no. 6 Afei ɔde ɔkanto dua yɛɛ nnua nteaanteaa no, na ɔde kɔbere faa ho. 7 Ɔde nnua no hyehyɛɛ nkawa a ɛwɔ afɔremuka no nkyɛnkyɛn no mu na wɔde asoa. Ɔde nnua yɛɛ afɔremuka no te sɛ adaka a enni mmuaso. 8 Ɔde kɔbere yɛɛ ɔsɛn+ ne ne nnyinaso. Nhwehwɛ* na ɔde yɛe; mmea a wɔyɛɛ nhyehyɛe ma wɔbɛsomee wɔ ahyiae ntamadan no ano no, wɔn hɔ na onya fii. 9 Afei ɔyɛɛ adiwo wɔ ntamadan no ho.+ Ɔde hama papa a wɔde yɛ nwera yɛɛ ntama sensɛn adiwo no fã a ɛhwɛ anaafo fam no; ɛhɔ de no, ɔmaa ne tenten yɛɛ basafa 100.+ 10 Ɔde kɔbere yɛɛ adum 20 ne nnyinaso 20 no, na ɔde dwetɛ yɛɛ adum no nsusomu ne ne nkawa. 11 Ɔfã a ɛhwɛ atifi fam no nso, ɔyɛɛ ntama a ne tenten yɛ basafa 100 sensɛn hɔ. Na ɔde kɔbere yɛɛ adum 20 ne nnyinaso 20, na ɔde dwetɛ yɛɛ ɛho nsusomu ne nkawa no. 12 Adiwo no fã a ɛhwɛ atɔe fam no de, ɔde ntama a ne tɛtrɛtɛ yɛ basafa 50 sɛn hɔ. Ɔyɛɛ adum du sisii nnyinaso du so, na ɔde dwetɛ yɛɛ adum no ho nsusomu ne nkawa no. 13 Ná ne fã a ɛhwɛ apuei fam no nso tɛtrɛtɛ yɛ basafa 50. 14 Sɛ worewura adiwo hɔ a, na ntama a ne tenten yɛ basafa 15 sɛn ɔfã baako. Ná ɛwɔ adum abiɛsa a esisi nnyinaso abiɛsa so. 15 Sɛ worewura adiwo hɔ a, na ntama a ne tenten yɛ basafa 15 nso sɛn ɔfã noho. Ná ɛwɔ adum abiɛsa a esisi nnyinaso abiɛsa so. 16 Ɔde hama papa a wɔde yɛ nwera yɛɛ ntama twaa adiwo no ho hyiae. 17 Kɔbere na ɔde yɛɛ adum no nnyinaso nyinaa. Ɔde dwetɛ na ɛyɛɛ adum no nsusomu ne ne nkawa, na ɔde dwetɛ faa adiwo hɔ adum no nyinaa ho; nneɛma a wɔde susoo mu no nso, ɔde dwetɛ na ɛyɛe.+ 18 Ɔde hama bruu, hama afasebiri, hama kɔkɔɔ, ne hama papa a wɔde yɛ nwera yɛɛ ntama* a ne tenten yɛ basafa 20 sɛn adiwo no kwan ano, na efi soro besi fam nso na ɛyɛ basafa 5 te sɛ ntama a ɛsensɛn adiwo hɔ no.+ 19 Adum anan ne nnyinaso anan no, kɔbere na ɔde yɛe. Ɛho nsusomu ne nkawa no nso, na ɛyɛ dwetɛ, na ɔde dwetɛ faa adum no soro. 20 Nea wɔde bobɔɔ ɔsom ntamadan no ne adiwo no ntama mu tim fam nyinaa, kɔbere na ɔde yɛe.+ 21 Nneɛma a wɔde yɛɛ ɔsom ntamadan a Adanse+ Adaka no wom no, Mose ma wobuu ne nyinaa ano huu ne dodow. Ɔde saa adwuma no hyɛɛ Lewifo no nsa,+ na ɔsɔfo Aaron ba Itamar+ na na ɔda wɔn ano. 22 Hur ba Uri ba a ɔde Besalel+ a ofi Yuda abusuakuw mu no yɛɛ nea Yehowa ka kyerɛɛ Mose no nyinaa. 23 Ná Ahisamak ba Oholiab+ a ofi Dan abusuakuw mu no ka ne ho. Saa ɔbarima yi, na ɔyɛ odwumfo ne ntamanwemfo a otumi de hama bruu, hama afasebiri, hama kɔkɔɔ, ne hama papa a wɔde yɛ nwera nwene nneɛma. 24 Sika kɔkɔɔ a wɔde yɛɛ kronkronbea hɔ adwuma nyinaa, ne dodow ne sika kɔkɔɔ a wɔde bɔɔ ohim afɔre no nyinaa yɛ pɛ.+ Ná esi dwetikɛse* 29 ne nnwetɛbona* 730, sɛnea wobu dwetɛbona ano wɔ kronkronbea hɔ no.* 25 Asafo no mu nnipa a wɔkan wɔn no, dwetɛ a wɔde bae no si dwetikɛse 100 ne nnwetɛbona 1,775, sɛnea wobu dwetɛbona ano wɔ kronkronbea hɔ no.* 26 Dwetɛbona fã a wogyigyei no, obiara a wadi mfe 20 rekɔ a wɔkan no no de dwetɛbona fã bae,+ sɛnea wobu dwetɛbona ano wɔ kronkronbea hɔ no.* Ná wɔn nyinaa dodow yɛ 603,550.+ 27 Dwetɛ a wɔde yɛɛ kronkronbea no nnyinaso ne ntwamutam no nnyinaso si dwetikɛse 100. Nnyinaso+ 100 no yɛ dwetikɛse 100, kyerɛ sɛ nnyinaso biara yɛ dwetikɛse baako. 28 Na ɔde nnwetɛbona 1,775 yɛɛ adum no nsusomu, na ɔde dwetɛ faa ho, ɛnna ɔka boom. 29 Kɔbere a wɔde bɛyɛɛ akyɛde* no si dwetikɛse 70 ne nnwetɛbona 2,400. 30 Ɛno na ɔde yɛɛ nnyinaso a ɛwɔ ahyiae ntamadan no kwan ano, kɔbere afɔremuka no, kɔbere nkantankantan a ɛda so no, ne afɔremuka no ho nneɛma nyinaa; 31 ɛno ara nso na ɔde yɛɛ nnyinaso a ɛwɔ adiwo hɔ no, nnyinaso a ɛwɔ adiwo no kwan ano, ne nea wɔde bobɔɔ adiwo ntama no mu tim fam no nyinaa.+
^ Kyerɛ sɛ, ahwehwɛ a wɔde fagude te sɛ kɔbere a wɔatwiw ho hyɛnhyɛn na ayɛ.
^ Anaa “ohim afɔre.”